बुद्धको अनमोल वचन, जसले सोच्ने शैली बदल्छ – Sapana Sanjal
June 26, 2021 161
Sapana Sanjal : हामी जहाँ जन्मियौं, त्यो गौतम बुद्धको जन्मभूमी पनि हो भनेर गर्व गर्छौं । अहिले पनि हामी ‘गौतम बुद्ध जन्मिएको देश’ भनेर सगर्व नेपालको चिनारी दिन्छौ । यद्यपी गौतम बुद्ध किन विश्वमा कहलिए ? उनले चराचर जगतका लागि के गरे ? उनीबाट मानव जीवनका के कुरा सिक्न सकिन्छ ?
अब ‘स्मार्ट लक डाउन’मा जाने सीसीएमसीको निर्णय, बिमानस्थल पनि खुल्ने
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिनसम्म थप्ने तयारी, सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्ने दिने तयारी